Glaucoma Surgery (မျက်စိရေတိမ် ခွဲစိတ်ကုသခြင်း) - Hello Sayarwon
မျက်စိရေတိမ် ခွဲစိတ်ကုသခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ
မျက်စိရေတိမ်ခွဲစိတ်ခြင်းကို ဆေးပညာအရ trabeculectomy လို့ခေါ်ပြီး မျက်စိအာရုံကြောတွေ နောက်ထပ် ထိခိုက်မှု လျှော့ချဖို့ ပြုလုပ်ပါတယ်။ မျက်စိအာရုံကြောဟာ မျက်စိအတွင်းအမြင်လွှာက ပုံရိပ်တွေကို ဦးနှောက်ဆီ ပို့ပေးလို့ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို မြင်နိုင်ပါတယ်။ ရေတိမ်ဟာ မျက်စိထဲမှာ အရည်များ ပုံမှန်အတိုင်းမဟုတ်ဘဲ စီးထွက်ပြီး ဖိအားမြင့်တက်လာပြီး အာရုံကြော ထိခိုက်မှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။ အသက် ၄၀ကျော်အရွယ် ၅၀လောက်မှာ တယောက်လောက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပိုဆိုးလာရင် မျက်စိကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ကေ့စ်တွေမှာ မျက်စိရဲ့ ဖိအားပုံမှန် ရှိနေလျက်နဲ့ မျက်စိအာရုံကြောဟာ ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
ရေတိမ်ခွဲစိတ်ခြင်းဟာ မျက်စိထဲက ဖိအားတွေ လျော့သွားအောင် အရည်များကို စီးထွက်စေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရေတိမ်ရဲ့ဖိအားကြောင့် ဖြစ်နေတဲ့ နာကျင်မှုကို လျော့ကျစေပါတယ်။
မျက်စိရေတိမ် ခွဲစိတ်မှုရဲ့ ဖြစ်ပါားနိုင်ခြေ အန္တရာယ်တွေက ဘာတွေလဲ
ခွဲစိတ်မှုကို မရွေးချယ်ခင်မှာ ဆေးဝါးကုသမှုကို ပြုလုပ်ပါတယ်။ လေဆာရောင်ခြည်နဲ့ ခွဲစိတ်ခြင်းဟာလည်း ရွေးချယ်မှု တခုဖြစ်ပါတယ်။ လေဆာရောင်ခြည်နဲ့ အဆင်မပြေတဲ့အခါ ပုံမှန်ခွဲစိတ်ခြင်းကို ပြုလုပ်ပါတယ်။ တခါတရံမှာ ရေတိမ်နဲ့ အတွင်းတိမ်ခွဲစိတ်မှုကို ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ရပါတယ်။
ရေတိမ်ခွဲစိတ်မှုရဲ့ အတွေ့အများဆုံး ပြသနာကတော့ အမာရွတ်ဖြစ်ခြင်းပါပဲ။ တခါတရံမှာ အမာရွတ်ဟာ မျက်လုံးရဲ့ အရည်စီးဆင်းမှုကို အဟန့်အတားဖြစ်ပြီး အရည်ဖု ဖြစ်လာစေပါတယ်။ ဒီအရည်ဖုက ဒုက္ခပေးတဲ့အခါ ခွဲစိတ်မှုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Mitomycin ဆိုတဲ့ဆေးကို ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်နေစဉ် အတွင်းမှာ အမာရွတ်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ဖို့ သုံးပါတယ်။ 5-fluorouracil ဆေးကို အသုံးများပေမယ့် ခွဲစိတ်မှုပြီးချိန်မှာတော့ မသုံးနိုင်ပါဘူး။ 5-fluorouracil ကို ခွဲစိတ်နေစဉ်မှာ သုံးနိုင်သလို ခွဲစိတ်ပြီးချိန်မှာ အမာရွတ် မဖြစ်အောင် ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ မျက်သားထဲကို ထိုးသွင်းနိုင်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်မှုအပြီးမှာ ဖြစ်နိုင်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြသနာတွေကတော့
ဗဟိုအမြင်အာရုံ အမြဲတမ်း ကွယ်သွားခြင်း။ မခွဲခင်မှာ အမြင်အာရုံ ဘယ်လောက် ထိခိုက်ထားသလဲ ဆိုတာအပေါ် မူတည်ပါတယ်။
မျက်စိရေချိန်တက်ခြင်း၊ မျက်စိရှေ့ပိုင်းမှာ ကွက်လပ်ဖြစ်သွားစေပြီး ရေတိမ်အပြင်းစား ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရှားတော့ရှားပါတယ်။
ခွဲစိတ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြသနာတွေကတော့
မခွဲစိတ်မီထက် ပိုဆိုးသော အတွင်းတိမ်ဖြစ်ခြင်း
မျက်လုံး၏ နောက်ပိုင်းတွင်ရှိသော အာရုံကြောတွင် အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
မျက်ခမ်းတွဲကျခြင်း စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်မှုမခံယူခင်မှာ ဖြစ်နိုင်ခြေ အန္တရာယ်တွေ နောက်ဆက်တွဲ ပြသနာတွေကို သိရှိနားလည်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ သိလိုတာတွေရှိရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။
မျက်စိအတွင်းတိမ် ခွဲစိတ်ဖို့အတွက် ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားရမလဲ
သင့်ရဲ့ မကြာသေးမီက သုံးစွဲနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေ၊ ဓါတ်မတည့်မှုတွေနဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေတွေ အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရပါမယ်။ မခွဲစိတ်ခင်မှာ မေ့ဆေးဆရာဝန်နဲ့လည်း တွေ့ဆုံရပါမယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ စားသောက်ခြင်းကို ရပ်တန့်ရမယ်ဆိုတဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေကို လိုက်နာဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
မခွဲစိတ်မီမှာ စားသောက်ခြင်း ကိစ္စတွေအတွက် ရှင်းလင်းတဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေ သိရဖို့လိုပါတယ်။
မေ့ဆေးအမျိုးအစားများစွာရှိပြီး ဘာကိုရွေးချယ်မလဲ ဆိုတာ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်မှုဟာ ၄၅-၇၅ မိနစ်လောက်ထိ ကြာနိုင်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်ရာမှာ မျက်လုံးထဲက အရည်တွေ စီးထွက်သွားအောင် လမ်းကြောင်းဖော်ပြီး မျက်ခွံအောက်မှာ စုစေပါတယ်။
သိလိုတာတွေ၊ စိုးရိမ်တာတွေရှိရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
ခွဲစိတ်ပြီး နာရီအနည်းငယ်ကြာအပြီးမှာ အိမ်ပြန်နိုင်ပါတယ်။
ပထမတပတ်အတွင်းမှာ ဆရာဝန်ဟာ မကြာခဏ ပြန်ချိန်းပြီး ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။
လူအများစုဟာ အလုပ်ကနေ ၂ပတ်လောက် အနားယူဖို့ လိုပါတယ်။
ဆရာဝန်နဲ့ ပြန်လည်ပြီး မစစ်ဆေးရသေးခင်အထိ ရေကူးခြင်း၊ အလေးအပင်မခြင်း၊ ခါးအောက်ပိုင်းထိ ခေါင်းငုံ့ခြင်းစတာတွေ မပြုလုပ်ရပါဘူး။
လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ခြင်းဟာ ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြန်ရစေပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
လူအများစုဟာတော့ မျက်စိရေတိမ်ခွဲစိတ်မှုအပြီးမှာ ပိုပြီး ကောင်းမွန်သွားကြပါတယ်။
Reference: Trabeculectomy (Filtration Surgery) for Glaucoma. http://www.webmd.com/eye-health/trabeculectomy-filtration-surgery-for-glaucoma. Accessed July 16, 2016.
Glaucoma – Surgery. http://www.webmd.com/eye-health/tc/glaucoma-surgery. Accessed July 16, 2016.
Glaucoma Surgery. http://www.allaboutvision.com/conditions/glaucoma-surgery.htm. Accessed July 16, 2016.
Glaucoma Surgery. http://www.glaucoma.org/treatment/surgery-overview.php. Accessed July 16, 2016.